Ny Fihetsika sy ny toetoetry ny vatana ety ivelany mandritra ny lamesa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Randriamanamahenina Robert il y a 5 années
Ny fihetsika rehetra sy ny toetoetry ny vatana na ny an’ny pretra na ny diakra na ny mpanentana eny fa na dia ny an’ny vahoaka aza, dia tsy maintsy mampiseho ilay fankalazana tsara an’Andriamanitra. Fihetsika sady tsotra ary indrindra maneho ny fisian’Andriamanitra eo anivon’izay mivavaka. Ny fihetsika litorijika dia maneho avy hatrany ny hevitry ny vavaka sy ny zotram-bavaka rehetra ary manentana ny olona rehetra handray anjara mavitrika amin’ny vavaka izay atao. Araka izany dia tsy maintsy tandrovana hatrany ireo fepetra litorjika napetraky ny Fiangonana mba tsy hihoa-pefy ny tsirairay ka hanao izay mahafinaritra azy manokana sy izay mba heveriny ho tsara.
Ny toetoetra iombonana izay tandrovin’ireo mpandray anjara amin’ny vavaka dia endriky ny fiombonan’ny tsirairay ao amin’ny ankohonana kristianina mankalaza ny litorijia; izany hoe, maneho sy mampivelatra ny toe-tsaina sy ny fihetseham-po mivavaka amin’ireo mpandray anjara ny toetoetra iombonana.
Mitsangana daholo ny kristianina:
Mandritra ny hira fidirana, amin’io fotoana io ny pretra no manatona ny otely.
Amin’ny vavaka fanombohana ;
Rehefa hanao ny Aleloia alohan’ny Evanjely ;
Mandritra ny fitoriana ny Evanjely;
Mandritra ny fiekem-pinoana;
Mandritra ny ranombavaka
Manomboka amin’ny Ndeha hivavaka isika mianakavy…: Vavaka fanolorana, Prefasy, Masina;
Mandritra ny Anamnèse: Lalina sy mahagaga ny ataon’Andriamanitra ho antsika;
Amin’ny fiantsoana ny Fanahy masina aorian’ny Fankamasinana;
Amin’ny Rainay any an-danitra, amin’ny fifandraisan-tanana, amin’ny famakiana ny mofo, fiomanan’ny pretra handray komonio ;
Amin’ny ny vavaka aorian’ny komonio;
Ny anton’ny ilana ny mitsangana miaraka dia noho izy manana endrika fanajana sy fahalalam-pomba amin’ny ankapobeny. Ao amin’ny Sorona Masina, ny toetry ny mitsangana dia manana hevitra maromaro izay asehon’ny Soratra Masina. Fa ny heviny akaiky sady mazava dia mifantoka amin’ny Fitsanganan’i Kristy ho velona. Ny Evanjely dia mampiasa ny teny hoe mitsangana: I Jesoa nitsangana tamin’ny maty. Hatreto izany ny hevitry ny mitsangana ao amin’ny Sorona Masina dia ny faniriana handray anjara amin’ny Fitsanganan’i Kristy ho velona, olona mijoro, olona vonona hiroso. Atao eo am-pitsanganana ny fihainoana ny Evanjely, tsy mariky ny fanajana fotsiny fa olona vonona hirahina hitory rehefa nandray ny hafatra. Ny fiekem-pinoana dia manavao mandrakariva ny fahavononana ho vavolombelon’ny fisian’Andriamanitra sy ny Heriny ary ny Asany mandrakizay. Ny vavaka fanolorana sy ny fanombohan’ny vavaka fisaorana dia maneho fa vonona ho Sorona tahaka an’i Kristy avokoa izay mitondra ny anarana hoe Kristianina. Hany ka mihaino am-panajana ny santionan’ny tantaram-pamonjena nentin’i Kristy hita ao amin’ny Prefasy. Izany dia niafara tamin’ny nahafatesany sy ny nitsanganany ho velona na raha ao amin’ny Sorona Masina dia ny fankamasinana indrindra indrindra. Ka tsy maintsy mandohalika eto. Fa mitsangana manohy ny vavaka eokaristika avy eo.
Mipetraka kosa ny olona:
mba hihaino ny tenin’Andriamanitra mialoha ny Evanjely,
rehefa mihaino am-panajana ny toriteny,
amin’ny fanomanana ny tolotra,
amin’ny hira fisaorana an’Andriamanitra.
Ny anton’izany dia mba tsy hihetsiketsika noho ny havizanana ka tsy mitombon-tsaina, io toetoetra io dia tena manamora ny fifantohana sy ny fitombenan-tsaina ary ny fandinihana masina. Tsara tokoa io fihetsika ivelany io mba hahafahana mivavaka tsara samirery aorian’ny fihainoana ny Tenin’Andriamanitra sy aorian’ny fandraisana ny Vatan’ny Tompo.
Mandohalika kosa ny olona amin’ny fotoana:
Fiantsoana ny Fanahy Masina;
Fitantarana ny nanaovan’i Kristy ny Eokaristia sy ny fanandratana ny vatany aman-drany ;
Eny am-pitoerana avy nandray komonio.
Raha tsy afaka mandohalika noho ny antony maro: ara-pahasalamana, toerana tery na mifanitsa-kitro ny olona, dia tokony hiondrika lalina mandritra ny pretra mandohalika isaky ny avy manandratra.
Ny antony handohalihana dia satria tonga eo anivontsika Andriamanitra ka mendrika hitsahoana. Mandritra ny fanandratan’ny pretra ny Ostia masina sy ny Kalisy dia tsara raha mibanjina izany Andriamanitra izany isika. Fa mandritra ny fandohalihan’ny pretra kosa vao miondrika kely mba hankasitraka sy hitsaoka ilay Andriamanitra eo anoloantsika.
Adidin’ny Fivondronamben’ny Eveka no mijery akaiky sy mampifanaraka ny fihetsika sy ny fombafomba mahakasika izany, izay hita ao amin’ny Bokin’ny Sorona Masina amin’ny toe-tsaina sy ny fomba tsara hananan’ny vahoaka eo amin’ilay firenena. Ohatra: rehefa tonga amin’ny “Rainay any an-danitra” dia miara-mamela-tanana amin’ny pretra ny kristianina. Ny antony dia tsotra: toe-tsain’ny Malagasy mihitsy no miara-mirohotra miresaka amin’ny ray aman-dreny raha misy zavatra ho dinihana sy tiana angatahana, ny tso-drano hanao trano na zavatra hafa. Ny tanana mivelatra dia manambara fitalahoana na fiderana, manambara firaisam-po tanteraka amin’izay ifampiresahana. Izany dia araka ny fangatahan’ny lalàna litorjika noho ny litorjian’ny Fiangonana izay tena “souple” sady “fléxible” tokoa. Na izany aza dia tsy maintsy kajiana kosa mba hifanaraka amin’ny hevitry ny zotram-pivavahana sy ny fankalazana izany fampifanarahana izany. Efa lasa fomba amin’ny firenena sasany, ohatra, ny mandohalika ny vahoaka amin’ny faran’ny Sanctus ka hatramin’ny faran’ny vavaka eokaristika, sy alohan’ny komonio rehefa manao ny Zanak’ondry ny pretra.
Mba hahazoana fihetsika mendrika sady iombonan’ny rehetra mandritra ny fankalazana iray dia tsara raha mampahatsiahy mandritra ny fanentanana fohy ny mpanentana na ny diakra na ny pretra araka izay voalaza ao amin’ny Bokin’ny Sorona Masina.
Ankoatr’ireo fihetsika efa voalaza ireo dia tsy azo atao ambanin-javatra ny asa sy ny dia mizotra ataon’ny pretra, miaraka amin’ny diakra sy ny mpiara-dia aminy rehefa manatona ny otely masina izy ireo. Torak’izany ihany koa ny fihetsika ataon’ny diakra rehefa mitondra ny evanjeliera izy ka mametraka azy eo ambony fitoeram-boky alohan’ny fitoriana ny Evanjely. Mitovy amin’izany ihany koa ny kristianina izay mitondra fanatitra sy manatona ny otely masina mba handray komonio. Ireo rehetra ireo dia atao am-pahamendrehana sy atao tsara mba hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra sy hanampy ny olona hifantoka amin’ny fivavahana.
Ny hira, ny fihetsika rehetra ary ny vakiteny atao ao am-piangonana dia mila fanomanana. Iarahan’ny : pretra, mpanentana, mpamaky teny, ary ny mpitendry zava-maneno. Ny hampirindra ny fizotran’ny fivavahana no tena anton’izany fanomanana izany. Ny fotoam-pivavahana voaomana tsara no manampy betsaka ny olona hivavaka sy hifantoka amin’Andriamanitra.